Asian Traveler: Genting Highlands သို့ ပထမအကြိမ်
Genting Highlands ကိုတော့ မလေးရှားကို ရောက်ဖူးသူတိုင်း အတော်များများသိကြမှာပါ။ မလေးရှားကို ရောက်တဲ့သူတိုင်း Genting Highlands ကို သွားလည်ကြတာ များပါတယ်။ Genting Highlands ကတော့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် 1850m အထက်မှာရှိပြီး မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော် တောင်ပေါ် Casino ကစားဝိုင်းတွေနဲ့ စည်ကားနေတဲ့ နေရာတစ်ခုလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကာစီနို ကစားဝိုင်းတွေအပြင် ကစားကွင်းတွေ၊ ရှော့ပင်း စင်တာတွေနဲ့ စည်ကားလှတဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ပေါ်မှာတော့ အေးမြတဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ လှပတဲ့ တောင်ပေါ်ရှုခင်းတွေကို ခံစားနိုင်ပါတယ်။ မလေလေးရှား ပြည်နယ်ကြီး နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Pahang ပြည်နယ်နဲ့ Selangor ပြည်နယ်နှစ်ခု ကြားမှာ တည်ရှိပြီး ကွာလာလမ်ပူ မြို့နဲ့လဲ သိပ်မဝေးတာကြောင့် တစ်ရက်လေက် အချိန်ပေးရင်ဖြင့် နေရာ အတော်စုံစုံကို လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ ကွာလာလမ်ပူမြို့ကနေပြီး ကားနဲ့သွားရင် ၁နာရီလောက် ပဲကြာပါတယ်။ Genting Highlands ကို Bus နဲ့သွားချင်ရင်တော့ ကွာလာလမ်ပူမှာရှိတဲ့ Highway ကားဂိတ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ PuduRaya Bus Station နဲ့ Titiwangsa LRT Station နားမှာရှိတဲ့ Pekeliling Bus Station တောင်ခြေကိုရောက်တဲ့အခါ အရှေ့တောင် အာရှမှာ (3.38km) ခရီးအရှည်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Genting Skyway လို့ခေါ်တဲ့ ကေဘယ်ကားနဲ့ တောင်ပေါ်ကို တက်လို့ရသလို ကားနဲ့ပဲ တောင်ပေါ်အထိ ဆက်တက်လို့လဲ ရပါတယ်။ Genting Highlands ကို LRT နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ KL Central ကနေပြီး Gombak Station အထိ စီးရမှာပါ သတိပြုရမယ့်တစ်ချက်တော့ Gombak Station ကို Terminal Putra လို့လဲ ခေါ်ပါတယ်။ LRT ပေါ်မှာတော့။ Gombak Station က နောက်ဆုံး Terminal ဖြစ်တဲ့အတွက် လမ်းမှာ မှားဆင်းစရာမရှိပါဘူး။ Gombak ကိုရောက်ရင်တော့ LRT Station ဘေးနားလေးမှာပဲ Genting Hilands ကိုသွားတဲ့ ဘတ်စ်ကားဂိတ် ရှိပါတယ်။ ကားလက်မှက်ကတော့ Genting Sky Way လက်မှတ် အပါအ၀င် တစ်ဦးကို မလေးရှားရင်းဂစ် RM5သာ ကျပါတယ်။ ညမအိပ်ပဲ နေ့ချင်းပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ အပြန်ခရီးအတွက် လက်မှတ်ကြိုဝယ်ထားရင် ပိုသင့်လျှော်ပါတယ်။
Fun fair theme park မြင်ကွင်း
ကျွန်တော် Genting Highlands ကို ပထမအခေါက် ရောက်ခဲ့တုန်းက စင်္ကာပူက သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စည်သူနဲ့ အရှည်ကြီးတို့ မလေးရှားကို လာလည်တုန်းကပါ။ သူတို့နှစ်ယောက်က အဲဒီ့ကို သွားချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်လဲ သိသလောက် Pekeliling Bus Station ကနေပဲ သွားဖို့စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။ မနက်စောစောထပြီး ၈ နာရီလောက်မှ အိမ်ကနေ Pekeliling Bus Station ကို ကားလေးနဲ့ ထွက်လာလိုက်ပါတယ်။ ဟိုရောက်တော့ ကားလက်မှတ် ၀ယ်ပြီး အချိန် နဲနဲရှိသေးတာနဲ့ ကားဂိတ်နားက မလေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာပဲ နံနက်စာ စားလိုက်ကြပါတယ်။ Genting ကိုသွားမယ့် ဘတ်စ်ကားက နံနက် ၉ နာရီခွဲလောက်မှ စထွက်ပါတယ်။ Pekeliling ကကားတွေကတော့ ရိုးရိုးဘတ်စ်ကားတွေ အဆင့်လောက်ပဲ ရှိတာမို့ စီးလို့သိပ် မကောင်းပါဘူး။ ကားပေါ်မှာတော့ လူငယ်တွေ သိပ်မတွေ့ရပဲ အသက်ကြီးကြီး တရုတ်လူမျိုးတွေပဲ တွေ့ရပါတယ် (နောက်မှသိရတာက Genting Casino မှာ လာကစားတဲ့သူတွေက အသက်အရွယ်ကြီးတွေသာ များပါတယ်)။ ကားက Batu Cave ကနေပြီး Kuantan ကိုသွားတဲ့ Highway လမ်းအတိုင်း မောင်းသွားရင်း လမ်းမှာ Toll Gate တစ်ခုကို ဖြတ်ပြီးနောက် Genting Highlands ကိုသွားတဲ့ တောင်ပေါ်လမ်းအတိုင်း မောင်းလာပါတယ်။ လမ်းဘေး တစ်လျှောက် လှပတဲ့ တောင်ပေါ်ရှုခင်းတွေ ငေးမောကြည့်ရင် သူငယ်ချင်းတွေ စကားတပြောပြောနဲ့ လိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စီးလာတဲ့ကားက တောင်ပေါ်အထိ ရောက်တဲ့ကား ဖြစ်နေပါတယ်။ တောင်ပေါ် ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ၁၁နာရီလောက်ရှိနေပါပြီ။
ကားက Genting အ၀င် မုဒ်ဦးဝမှာ ရပ်ပေးပါတယ်။ ကားပေါ်က ဆင်းဆင်းချင်းပဲ အေးမြတဲ့ တောင်ပေါ် ရာသီဥတုက စတင်မိတ်ဆက်ပါတော့တယ်။ အဲဒီ့နေ့က နေသာတဲ့နေ့ ဖြစ်နေလို့ တောင်ပေါ်မှာ တ်ိမ်ခိုး တိမ်ငွေ့တွေ မတွေ့ရပါဘူး။ ကျွန်တော် ဒုတိယအကြီမ် ရောက်သွားတော့ တစ်နေ့လုံး တိမ်ခိုးတွေနဲ့ အလွန်ပဲ အေးမြတဲ့ ရာသီဥတုကို ခံစားရမှာပါ။ အရှည်ကြီးက ကျွန်တော်တို့ သုံးယောက်ထဲမှာ Genting ကို တစ်ခေါက် ရောက်ဖူးခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ သူကပဲ ဦးဆောင်ပြီး သွားပါတယ်။ First World Hotel ရှေ့မှာ ဓါတ်ပုံတွေရိုက် ဈေးဆိုင်တွေလျှောက်ကြည့်ပြီး ဗိုက်ဆာလာတာနဲ့ အိန္ဒိယဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ နေ့လည်စာ သွားစားကြပါတယ်။ အဲဒီ့ဆိုင်က ဘူဖေးပုံစံပါ။ ကျွန်တော်နဲ့ စည်သူက ဟင်းနှစ်မျိုးနဲ့။ အရှည်ကြီးက သုံးမျိုးထည့်ပါတယ်။ သုံးယောက်ပေါင်းကို မလေးငွေ RM 70 ကျပါတယ်။ KL မှာဆိုရင် စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ကောင်းကောင်း စားလို့ရတယ် ဆိုပြီး ပြန်ပြောကြသေးတယ်။ နောက်တော့ စည်သူက Casino ကစားဝိုင်းထဲ ၀င်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ သုံးယောက်သား ၀င်လိုက်ကြပါတယ်။ အ၀င်ဝမှာတော့ ရဲနှစ်ယောက်က ပတ်စ်ပို့တွေကို ထုတ်ပြရသေးတယ်လေ။ အသက်ပြည့်ပြည့်ကို စစ်တာပါ။ အသက် ၁၈ နှစ်အထက်မှ Casino ထဲကို ၀င်ခွင့်ပြုတာပါ။ အထဲမှာတော့ လောင်းကစားနည်းမျိုးစုံ ကစားလို့ရတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ အရှည်ကြီးက သူ့ဘာသာ တစ်ယောက်တည်း လျှောက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး ထွက်သွားပါတယ်။ စည်သူကတော့ လောလောလတ်လတ် ထွက်လာတဲ့ သူ့လစာကို ATM မှာ မလေးရှားရင်းဂစ် RM1400 ဖိုး သွားထုတ် လိုက်ပါတယ်။ သူက ဖဲကစားနည်း တစ်မျိုးကို စိတ်ဝင်စားနေလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ကစားနည်းကိုတော့ မသိဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီတော့ နှစ်ယောက်သား ကစားနည်းကို သင်ပေးတဲ့ စားပွဲတစ်ခုမှာ ၀င်ပြီး နေရာယူလိုက်ကြပါတယ်။ စည်သူက ကစားနည်းအကြောင်း တရုတ်လို မေးလိုက်တော့ စားပွဲဝိုင်းမှာထိုင်နေတဲ့ ၀န်ထမ်း တစ်ယောက်က ပြန်ရှင်းပြပြီး ကစားနည်းသင်ပေးပါတယ်။ ကစားနည်း သင်ပေးပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ နှစ်ယောက်သား ကစားဝိုင်းတစ်ခုကို သွားကြပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ကစားဝိုင်းတွေက လူပြည့်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကစားလို့မရသေးပဲ ဘေးကနေ ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။ ဒီကစားနည်းတွေက တစ်ပွဲကို မလေးငွေ RM200 လောက်ထိုးမှဖြစ်တာမို့လို့ စည်သူ့ကို မကစားဖို့ဘေးကနေ ပြောနေရတယ်လေ။
theme-park အတွင်း မြင်ကွင်းတစ်ခု
နှစ်ယောက်သား သူများတွေကစားနေတာကို လျှောက်ကြည့်ရင်း ဘောလုံးလှိမ့်တဲ့ ကစားနည်းတစ်ခု တွေ့မိပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ဘုရားပွဲတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ ရွှေဘောလုံးလှိမ့်တဲ့ ကစားနည်းလိုပါပဲ။ (လောင်းကစား ၀ါသနာမပါတာကြောင့် ကစားနည်းအမည်ကို မသိလိုက်ပါဘူး အဟီး) တစ်ခုတွေ့လို့ ၀င်ကြည့်မိတဲ့အခါမှာတော့ အရှည်ကြီးက အဲဒီ့ဝိုင်းရောက်နေတယ်လေ။ သူကအဲမှာ ကစားနေတာလေ။ တရုတ်ဘွားတော်ကြီးတွေ ထိုးတဲ့နံပါတ်ကို သူကလိုက်ထိုးနေတာ နဲနဲ နိုင်နေတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒီတော့ စည်သူက စိတ်ဝင်တစား ဖြစ်သွားပြီး သူလဲပဲ ၀င်ကစားပါလေရော။ သူ့မှာရှိတဲ့ RM1400 ဖိုးလုံး ကွိုင်စေ့တွေ လဲလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်က ဘာဖြစ်လို့ အကုန်လဲတာလဲဆိုပြီး မေးလိုက်တော့ အရှည်ကြီးကို နောက်ချင်လို့တဲ့။ ဒီတော့လဲ နောက် ငွေပြန်လဲလို့ရတာပဲလေ ဆိုပြီး ကြည့်နေလိုက်မိပါတယ်။ အဲမှာကစားရင်း သူက လေးငါးပွဲလောက် နိုင်ပါတယ်။ တစ်ပွဲနိုင်ရင် ၁ဆကနေ ၁၀ ဆအထိ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ လေးငါးပွဲလောက် နိုင်လာတော့ လက်ထဲမှာ ကွိုင်စေ့ အတော်များများ ရှိလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့အရင်းကို အိပ်ထဲထည့်ပြီး နိုင်တာလေးတွေ ဆက်ကစားလာတာ နိုင်တာလေးတွေ တဖြည်းဖြည်း ပြန်ကုန်လာပါရော။ ဒီတော့ အိပ်ထဲသိမ်းထားတဲ့ ကွိုင်စေ့တွေထုတ်ပြီး ပြန်လိုက်ရင်း လိုက်ရင်းနဲ့ ပါလာသမျှကို Genting မှာထားခဲ့ရပါလေရော။ ဒီတော့မှ Casino ခန်းမထဲကနေပြီး ပြန်ထွက်လာဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲဒီ့နေ့က စည်သူတော့မသိဘူး ကျွန်တော်ရယ် အရှည်ကြီးရယ်ကတော့ စိတ်ထဲမှာ အတော်လေး တနှုံ့နှုံ့နဲ့ ခံစားလိုက်ရပါတယ်။
Sky Way ပေါ်မှ တောင်ခြေသို့အဆင်း
ညနေ ၄နာရီခွဲလောက်ကျတော့ ကျွန်တော်တို့ တောင်ပေါ်ကနေပြီး Sky Way နဲ့ပြန်ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ အပြန်မှာတော့ Sky Way စီးဖို့အတွက် တန်းစီလိုက်ရပါသေးတယ်။ Sky Way ပေါ်မှာ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ဖြစ်ပါသေးတယ်။ Sky Way ပေါ်ကနေပြီးတော့ မလေးရှားရဲ့ တောတောာင် သဘာဝ အလှအပတွေကို ပေါ်စီးကနေပြီး ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒီတစ်ခေါက်မှ အလှအပတွေကို မခံစားနိုင်တော့ပါဘူး။ စိတ်ထဲတနုံ့နုံ့ ဖြစ်နေလို့လေ Sky Way ပေါ်ကအဆင်းမှာ ယိုမျိုးစုံရောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးကနေပြီး အပြင်ကို ပြန်ထွက်ကြရပါတယ်။ အဲဒီ့ဆိုင်မှာ သုံးယောက်သား အမြည်းမျိုးစုံ လိုက်မြည်းကြည့်ပြီးမှ လက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက် ယိုအနည်းငယ်ဝယ်ပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ တောင်ခြေရောက်တော့ ကားလက်မှတ်ဖြတ်ပြီး Kuala Lumpur ကို ပြန်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ အပြန်အတွက် ကားလက်မှတ်ခက တစ်ယောက်ကို RM7ပေးရပါတယ်။ စည်သူကတော့ ဒီနေ့ ကံကောင်းပါလားပေါ့။ လောင်းကစားဆိုတာ ဘယ်ကစားနည်းမှ ကောင်းတယ်လို့ မရှိဘူးဆိုတာ တကယ်ပဲ မှန်ပါတယ်။ မြန်မြန်ကုန်တာနဲ့ ဖြေးဖြေးကုန်တာပဲ ကွာမယ်ထင်ပါတယ်။ အခု ဒီပို့စ်လေးကို တင်ဖြစ်လိုက်တာက Genting Casino ကိုသွားမယ့် သူများအတွက် ကြိုတင်သတိပေးတဲ့ အနေနဲ့ပေါ့ဗျာ။ ဒုတိယအကြိမ် နှင့် တတိယအကြိမ် သွားခဲ့တုန်းက အတွေ့အကြုံလေးကိုတော့ နောက်ပို့စ်မှာ ထပ်ရေးပေးပါ့မယ်။
ကိုလင်းပြောတာမှန်တယ် တတ်နိုင်ရင်လေ casino ထဲမ၀င်တာအကောင်းဆုံးပဲ မလေးတောင်ပေါ်ကို တခေါက်လောက်တော့ သွားကြည့်ချင်သေးတယ်
Because of your post, most of the people are thought that I am Gambler!!
I would like to declared that I am not.. :)
Everyone might have their first time.. Yes, this is also one of my first time experience..
But I must say thanks and appreciated my friend's effort and I am assure he had spent much of his times ( without sleeping the whole night ) and idea to write this post.
Keep going my dear friend! You are doingagood job...
I am assure everyone will definitely will love your posts.
Well.... I am too proud to be your friend! Yes..
Because through your post, I can feel that how much you are romantic, innovative & excellent in writing.... And especially thanks to you for writing this post.
Absolutely, we will never forget this trip, moreover because of your post.
In here, Thank you very much again my lovely friend.....!!!
တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ။ "အသက် ၁၈ နှစ်အထက်မှ Casino ထဲကို ၀င်ခွင့်ပြုတာပါ။" လို့အကိုရေးထားတာတွေ့လို့။ ဒါပေမဲ့ http://www.rwgenting.com/en/casino/index.htm လင့်မှာ ၂၁ နှစ်အထက်မှဝင်လို့ရမယ်ရေးထားတယ်။ ၁၈နှစ်အထက်ဆိုတာနဲ့ ၀င်လို့ရမရသေချာသိခြင်လို့ပါ ခင်ဗျာ။
Genting Highlands Casino မှာ အသက် ၁၈နှစ်အထက်ဆိုရင် ၀င်ခွင့်ပြုပါတယ်။ စာပြန်တာ နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။